မာမာအေး | MoeMaKa Burmese News & Media
>Burmese Community Center Fund raising event in SF Bay
ကာတွန်း Joker - ငြိမ်း ခြေ ဥ လား ခြေ ဥ ငြိမ်း လား ...
၀ါကျဖြူ - လေထုထဲက အနံ့အသက်များ
>Kyaw Zin Min (Mae Sod Night Bazaar) - Burmese migrants life in Thailand.
ချမ်းမြ - “မန်းဟန် နဲ့ မန်းသင်္ကြန် ကို ဒီနှစ် နန်းဆန်စေချင်တယ်”
မောင်စိုးချိန် - ကျောင်းသားသပိတ် အရေးတော်ပုံ (၇)
Posts Tagged ‘ မာမာအေး ’
အာဏာရှင် ဗိုလ်နေဝင်း၏ ဇာတ်သိမ်းခန်း – အပိုင်း(၆) သန်းဝင်းလှိုင် နုိုဝင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၃ ● နိုင်ငံတော်အာဏာ သိမ်းပိုက်လိုက်ခြင်း ဖက်ဒရယ်မူနှင့် ပတ်သက်သော လူမျိုးပေါင်းစုံ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ဒုတိယနေ့ကို ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊...
ကာတွန်းစောငို – အိမ်ပြန်မယ့် သမ္မတကြီး နဲ့ …
ကာတွန်းစောငို – အိမ်ပြန်မယ့် သမ္မတကြီး နဲ့ … နိုဝင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၃ Tags: မာမာအေး Related posts သန်းဝင်းလှိုင် – အာဏာရှင် ဗုိုလ်နေ၀င်း၏ ဇာတ်သိမ်းခန်း (အပုိုင်း...
Maung Oo – Cloud Whisper
“တိမ် စေသူ” မောင်ဦး ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၃‘တိမ်ပွေပွေလေအဝှေ့မှာမြောက်မြေဆီအောက်ခြေရွှေ့ပြန်တော့သည်မေ့သခင်ကိုဖြင့်တမြင်မြင် မြင်ယောင်မှန်းနေလို့ခင်းသာရင် ရွာစဉ်တန်းကိုဖြင့်လှမ်းလိုက်ပါ့တိမ်ပြာရယ်လို့ …’ (ကြည်အေး “မိုးတိမ်ကိုမှာ” ကဗျာ) မိုးတိမ်တွေကို ငေးမောကြည့်နေမိသည့်အခါတိုင်း ခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတတ်သည်။ သည်တုန်းကတော့ ဤခံစားမှုကို အဓိပ္ပါယ်ဖော်၍မရခဲ့။...
Law Eh Soe – Song from old nest
“ အသိုက်ဟောင်းတစ်ခု၏တေးသံ ” လောအယ်စိုး၊ အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၃ အခန်း (၁) “ ကဲ …….. ဘယ်လိုဖြစ်လာကြတုံး ” စကားပြန်လုပ်ပေးမယ့် မိတ်ဆွေက မေးသာ မေးလိုက်ရ၊ အခြေအနေကို...
ရီပတ်ဘလစ်ကန်လွှတ်တော်ကြောင့် အမေရိကန်အစိုးရယန္တယား ရပ်ဆိုင်းရတော့မည် မိုးမခသတင်းကောက်နုတ်ချက်၊ အောက်တိုဘာ ၁၊ ၂၀၁၃ စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၀ါရှင်တန်ဒီစီ၊ ညနေခင်းသတင်းများအရ ရီပတ်ဘလစ်ကန်အမတ်အများစု ကြီးစိုးတဲ့ အောက်လွှတ်တော်က အိုဘားမားအစိုးရနှင့် ဒီမိုကရက်တို့၏အထက်လွှတ်တော်ကို ဘတ်ဂျက်အရေး အလျော့မပေးတန်း တင်းမာနေမှုများကြောင့်...
Khin Myo Chit – Letter to Dr. Maung Maung (2th Sept 1988)
ခင်မျိုးချစ် – ငါပြောမယ် ရွှေရှင်ဘုရင်ရဲ့ နင် ဆင်ခြင်ဦး (သမိုင်းတခေတ်က ပေးစာ၊ ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း)စံတော်ချိန်သတင်းဂျာနယ်၊ သြဂုတ် ၂၁၊ ၂၀၁၃ ထုတ် မှ ကောက်နုတ်သည် (၈၈ အရေးတော်ပုံကာလတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော...
ဘယ်တုန်းက ပေါ်ဖူးလုို့လဲ ကာတွန်း အောင်မော် သြဂုတ် ၂၀၊ ၂၀၁၃ ကာတွန်းအောင်မောင်ဖေ့ဘုတ်ခ်မှ ပြန်လည်ကူးယူပါသည်။ Tags: မာမာအေး Related posts သန်းဝင်းလှိုင် – အာဏာရှင် ဗုိုလ်နေ၀င်း၏ ဇာတ်သိမ်းခန်း (အပုိုင်း ၆) (0)...
တုိုင်းပြည်ပျက်တာကျ မပြောဘူး ကာတွန်း – အောင်မော် သြဂုတ် ၁၈၊ ၂၀၁၃ Tags: မာမာအေး Related posts သန်းဝင်းလှိုင် – အာဏာရှင် ဗုိုလ်နေ၀င်း၏ ဇာတ်သိမ်းခန်း (အပုိုင်း ၆) (0)...
အလင်္ကာ အလွမ်းမှတ်တမ်း ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) သြဂုတ် ၁၅၊ ၂၀၁၃ အလင်္ကာကျော်စွာ ရွှေမန်းဦးတင်မောင်သည် ငယ်ရွယ်စဉ် (၁၄)နှစ်သားအရွယ်ကပင် မြန်မာ့ဇာတ်သဘင် လောကသို့ရောက်ရှိ ကပြခဲ့သူ။ ရွှေမန်းတင်မောင် ဇာတ်သဘင်ကို တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများစွာဖြင့်...
ကျေနပ်သူရော ရှိလုို့လား ကာတွန်း – အောင်မော် သြဂုတ် ၁၂၊ ၂၀၁၃ ကာတွန်းအောင်မော် ဖေ့ဘုတ်ခ်မှ ပြန်လည်ကူးယူသည်။ Tags: မာမာအေး Related posts သန်းဝင်းလှိုင် – အာဏာရှင် ဗုိုလ်နေ၀င်း၏ ဇာတ်သိမ်းခန်း (အပုိုင်း ၆)...
Maung Luu Yay – The Next Nargis … Burmese Association Law
ဒုတိယနာဂစ် သို့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ့များဆိုင်ရာ ဥပဒေလေနီကြမ်းကြီးသည် မြန်မာပြည်တဝှမ်းကို တိုက်ခတ်ဖျက်ဆီးပေတော့မည် မောင်လူရေး၊ သြဂုတ် ၉ ၊ ၂၀၁၃ေ အခန်း(၁) “ဖွဲ့စည်းခွင့်လက်မှတ်” နှင့် အခြားအချက်အလက်များ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အခန်း(၈)၊ နိုင်ငံသားများ၏မူလအခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များ...
Ko Myoe – 8888 – 25 years – Anniversary Graphics
ဂရုပ်ဖစ် ကိုမျိုး (၈၈) – ၈လေးလုံး ငွေရတု အမှတ်တရသရုပ်ဖော်များ သြဂုတ် ၄၊ ၂၀၁၃ Tags: မာမာအေး Related posts သန်းဝင်းလှိုင် – အာဏာရှင် ဗုိုလ်နေ၀င်း၏ ဇာတ်သိမ်းခန်း (အပုိုင်း...
မြ၀တီ – မဲဆောက် ရေကြီးမှု ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ Photo Creadit to Skyny Lovelink ဇူလုိုင် ၃၀၊ ၂၀၁၃ ယခုရက်ပုိုင်းအတွင်း ရက်သတ္တပတ်ခန့် မုိုးဆက်တုိုက်ရွာသွန်းခဲ့မှုကြောင့် သောင်ရင်းမြစ်ရေတုိုးလာသည့် အတွက် ထုိုင်း – မြန်မာနယ်စပ် မြ၀တီနှင့်...
Dr. Ko Ko Lwin – Remembering Saw Bwe Hmu
ကျွန်တော့် ဆရာ စောဘွဲ့မှူး ဒေါက်တာကိုကိုလွင် (Iron Cross) (ဂီတပညာရှင် စောဘွဲ့မှူး ကွယ်လွန်ခြင်း (၁၉) နှစ်ပြည့် (၂၄၊ ဇူလိုင်၊ ၂၀၁၃) အမှတ်တရ၊ မိုးမခ) ဓာတ်ပုံ – IC...
ဒ ဂု န် တာရာေ နွ ဦး( ၈ ) အောင်ဝေး ဇူလုိုင် ၂၃၊ ၂၀၁၃ “မည်သို...
Daw Suu and U Shwe Mahn
သူရဦးရွှေမန်း နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နားလည်မှု တည်ဆောက်ထောက်လှမ်းရေးသတင်းဇူလိုင် ၂ဝ၊ ၂ဝ၁၃ ယမန်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်တွင် ပြုလုပ်သော ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အခမ်းအနားတစ်ခုသို့ သူရ ဦးရွှေမန်း တက်ရောက်သည် – ဓာတ်ပုံ –...
ပညာဒါနထိရောက်မှု ရှိစေရေးအတွက် ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) ဇူလုိုင် ၁၇၊ ၂၀၁၃ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ သုခအလင်းပညာဒါနမှ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လမှစ၍ ဆေးတက္က သိုလ်နှင့် ပညာရေးတက္ကသိုလ် တက် ရောက်ခွင့်ရသော...
U Nandawuntha – Poem
အမှန်ကတော့ ဦးနန္ဒဝံသ (ကာရိုလိုင်နား) ဇူလုိုင် ၁၃၊ ၂၀၁၃ အတုတွေ ယုံနေကြလို့အမှုပုံတွေပေါ် ထိုင်နေကြရ။ မင်းမရှိ ငါမရှိတဲ့ လောကမှာ အဖြေမှန်ရဖို့ကဲ အဆွေရေ သွား...
Zun Pwint – Articles
ဖေဖေ့အကြောင်း (၁) ဇွန်ပွင့် ဇူလုိုင် ၆၊ ၂၀၁၃ ဖေဖေဆုံးတာ လေးနှစ်ပြည့်ပြီ…. ။ ကာတွန်းဆရာဘ၀နဲ့ (၁၉၄၆-၂၀၁၃) အထိ (၆၇) နှစ်တိုင် သံမဏိရှည်ကြာနေသွားခဲ့ပါတယ်။ ကာတွန်းရေးဆွဲခဲ့တာကတော့ ၁၉၉၈ ခုနှစ်ထိပါပဲ။ ပထမအကြိမ်...
လုပ်ငန်းရှင်ကြီး ဦးဇော်ဇော် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ဖွယ်ရှိထောက်လှမ်းရေးသတင်းဧပြီ ၂၅၊ ၂ဝ၁၃အမျိုးသမီး ဘောလုံးသမားများနှင့် တွေ့ရသော ဦးဇော်ဇော် (ဓာတ်ပုံ – မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်)လုပ်ငန်းရှင်ကြီး ဦးဇော်ဇော်သည် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ဖွယ်ရှိကြောင်း...